Tirada Safarka Jasiiradda 'Express Express' oo la kordhiyay | RayHaber
HomeTURKEYGobolka Marmara54 SakaryaTirada Safarka Jasiiradda 'Express Express' oo la kordhiyay
Dalxiisyada jasiiraddu way kordheen
Tirada Safarka Jasiiradda 'Express Express' oo la kordhiyay; Maalmihii la soo dhaafay, mid ka mid ah arrimaha helay cabashadii ugu badneyd ee Ada Express xawaaraha tirada dib-u-celinta 4, dib-u-celinta 5 ayaa sheegtay.
Sakarya Community Civil Platform oo ku saabsan dhoofinta Ada Express (SASTOP). Bayaanka la soo saaray, Tareenka JasiiraddaSafarrada ayaa markale ka soo kabanaya safarka 4, isdhaafsiga 5 ee isdhaafka ayaa yiri. Waxaa la cadeeyay in go’aankan ay qaateen Gudiga Tareenka Jasiiradaasi la dhaqan galin doono laga bilaabo bisha Diseembar 7.
Gudoomiyaha Sastop Av. U. Önder Döker wuxuu sameeyey bayaan ku saabsan ADA TRAIN COMMISSION.
Sida Sastop, wareysiyadeenna TCDD iyo Gaadiidka TCDD waxay ku bixiyaan natiijooyin wanaagsan. Milkiilayaasha idman ee Sakarya naga badan 07 Laga soo bilaabo Disembar ilaa Adapazarı - Pendik Adapazarı inta u dhaxaysa imaatinka 4 4 orda Adapazarı wuxuu muujinayaa bixitaanka 5 5 soo laabashada ayaa la baray. Kordhinta tirada baabuurta dagaalka ayaa sidoo kale ajandaha la soo saaray.
07 Laga bilaabo Disembar ilaa 5 waxay ku soo laaban doontaa 5 waqtiyada tareenka soo laabashada:
Socdaalka Adapazari Pendik Departure
Sida xogta aan kuhelayno masuuliyiinta
THIRD (3.) Dhismaha xariiqda caadiga ah Marka shaqooyinka la dhammeeyo, tirada safarada ADA EXPRESS ayaa loo kordhin karaa 8 - 12 sidii hore iyo 8 - 12 waa la kordhin karaa sida safarka wareega iyo soo laabashada. Waxaan wadaageynaa aqoonta ah in tirada duullimaadyada la kordhin doono iyadoo loo eegayo danta iyo baahida tareenka ee dadweynaha.
Waxaan ubaahanahay inaan ilaalino tareenkayaga. Dadkeenu waxay xaq u leeyihiin inay ku safraan tareen rakhiis ah. Si aynaan u lumin adeeggan, qof walba waa inuu sameeyaa qaybtiisa.
Haddii aan nahay xubin ka tirsan shirkadda 'Sastop', waxaan jeclaan lahayn inaan u mahadcelinno dhammaan dadkii ina soo shaqeeyey iyo kuwa tareenkayaga ku taageeray annaga iyo dadkayaga nagu taageera saxiixyadooda. (The Sakaryayenihab)
Tirooyinka Tareenka Maalinlaha ah ee Tareenka Jasiiradda Ka Soo Rrooga 5 illaa 4
Xilliga Ada ee safarka
Jadwalka Tababaraha Jasiiradda